चन्द्रौटा घटना भएको १३ वर्ष पुरा, के भएको थियो २०६४ भाद्र ३० गते ? « Mayadevi Online News Portal
चन्द्रौटा घटना भएको १३ वर्ष पुरा, के भएको थियो २०६४ भाद्र ३० गते ?
प्रकाशित मिति : ३१ भाद्र २०७७ बुधबार १९:५७
घटना भएको १३ वर्ष बितिसक्दा पनि अझै चन्द्रौटा घटनाका पीडितले अझै न्याय पाएका छैनन् । २०६४ भदौ ३० गते कपिलवस्तुको कुदरबेटवाका तत्कालिन तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका स्थानीय नेता अब्दुल मोइद खाँको अज्ञात समूहले हत्या गरेको थियो ।
सोही कारण भड्केको हिंसाका कारण १४ सर्वसाधारणको ज्यान गएको थियो । घटनामा २० करोडभन्दा बढीको धनमाल क्षति भएको थियो । घटनापछि सरकारले लोकेन्द्र मल्लिकको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो । समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनसमेत अहिलेसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन् । घटना पछिका हरेक वर्ष भदौ ३० लाई पीडीतले कहिले कालो दिनका रुपमा स्मरण गर्दै आएका छन् ।
यस वर्ष कोरोना भाइरसका कारण कुनै औपचारिक कार्यक्रम भने गरिएन । कपिलवस्तु संघर्ष समितिका अध्यक्ष महादेव पोखरेलले भने, ‘सर्वोच्च अदालतमा दर्जनौं पटक पेसी सरिसकेको छ, हामी न्याय खोज्न कहाँ जाऔं अब ?’ अहिलेको सरकारले पनि न्याय र राहत नदिएको पीडीतहरुको गुनासो छ ।
कहालिलाग्दो यो घटनाको १३ वर्ष बितिसक्दा पनि पीडितले अझैसम्म पनि राज्यबाट न्याय नपाएको गुनासो भन्दै राज्यले उचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने राष्ट्रिय मानव अधिकार प्रतिष्ठान कपिलवस्तुका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद खतिवडाले बताए ।
मानव अधिकारकर्मी खतिवडाले सरकारीले क्षतिपूर्तिसमेत नदिएकाले पीडितहरु झन पीडित बन्दै गएका छन् । सरकारले न्याय दिनुपर्ने उनले माग गरे । घटनापछि भड्किएको हिंसाका कारण चन्द्रौटा, कृष्णनगर, गणेशपुर, बिशनपुर, चनईलगायतका स्थानमा हत्या, बलात्कार, आगजनी हुँदा ठूलो धनजनको क्षति भएको थियो । १ सय ६० सवारीसाधनमा आगजनी हुनुका साथै १० हजारभन्दा बढी नागरिक विस्थापित भएका थिए ।
पीडितहरुले मल्लिक आयोगको छानबिन प्रतिवेदनअनुसार क्षतिपूर्तिको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढकाए । सर्वोच्च अदालतमा ९ वर्ष अगाडि रिट दायर गरेको भए पनि रिटको अझैसम्म सुनुवाई भएको छैन् ।
विवाह भएको एक महिना नबित्दै सोही घटनामा आफ्ना श्रीमान गुमाउन पुगेकी बिशनपुर ३ की अमृता सुनारले घटनाका आरोपितलाई सरकारले अझैसम्म पक्राउ गर्न नसक्नु दःखद् भएको बताइन् ।
आफ्नो आँखा अघि नै श्रीमानको हत्या गर्ने अपराधिलाई कारबाही गर्नुको सट्टा यत्तिकै छाडिएको उनले गुनासो गरिन । उनले आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न पनि माग गरिन ।
शैक्षिक धरोहर तेजकुमार बौद्धाचार्यको निधन
कपिलवस्तु । शैक्षिक धरोहरका रुपमा रहेको कपिलवस्तु नगरपालिका वडा नम्बर
कोरोनाबाट कपिलवस्तुकी थप एक महिलाको मृत्यु, जिल्लामा मृतकको संख्या २१…
मायादेवी अनलाइन, चार नम्बर । कपिलवस्तुकी थप एक महिलाको कोरोनाको